ỌKA OKORO, EJIJE ỌPỤRỤICHE APỤTAWO – hoo!haa!!
Abụja: Ndị nile omenala Ndigbo nakwa ejije Nollywood na-amasị ga-ezukọta n’ụlọ onyonyoo Genesis Cinema dị na Novare Gateway Plaza(Shoprite), Abuja n’ụbọchị Satọdee, abalị iri n’abụọ n’asaa nke ọnwa Julaị maka ngosipụta mbụ nke Ọka Okoro.
Ọka Okoro bụ ejije banyere ihe mere eme n’obodo Nenwe dị n’okpuru ọchịchị Aninri n’Enugwu Steeti mgbe ochie.
Ejije a nke dị nkeji otu narị n’iri abụọ (120 minutes) na-akọ maka ihe abụọ pụtara ìhè mere n’obodo a. A kọkwara akụkọ abụọ ahụ n’ụzọ ga-eme ka anya ndị mmadụ tọ na ya site na mmalite ya ruo na ngwụcha ya.
Ndị ọbụla uche ha dị n’ịmata banyere agụgụala nakwa usoro obibi ndụ Ndigbo mgbe gboo, ma ndị Nenwe tinyekwara ndị ọzọ, ga-enwe nnukwu mmasị n’ejije a.
Expadoc Productions nke Chinelo (Ndigwe) Ụzọigwe nọ n’isi ya bụ ha mebere ya bụ ọmalincha ejije. Chinelo anọọla na Nollywood ihe karịrị ọgụ afọ dịka onye ejije nakwa omebe ejije. O sonyewokwa n’ejije karịrị iri asaa. Ọ mepụtawokwa ejije anọ nke onwe ya.
Ọka Okoro bụ mbụ n’ime usoro ejije ọ ga-emepụta ndị ebumnuche ha bụ nchekwa omenala Igbo, agụgụala Igbo nakwa ihe megasịrị na ndụ Ndigbo n’adịghị nchefu.
Kaọdịtaa, ihe iche aka mgba dịka ụbịam, ọrịa, tinyekwara mpụ n’arụrụala dị iche iche na-arịzị ibe ya elu. Nke a meziri na ohere anaghịkwa adịzị ileba anya n’ụzọ nka n’ụzụ nakwa ndụ agba ọhụrụ sizi ememila ezigbo akparamagwa nakwa omenala dịbu n’ala anyị.
Expadoc Productions, site n’Ọka Okoro nakwa ejije ndị ọzọ ha na-emebe chọrọ iweghitekwa uche ndị be anyị n’ezigbo usoro obibi ndụ nakwa nkwenye ejibu mara Ndigbo iji mee ka obodo dịkwa mma ọzọ.
Previous Post: NCHETA ỌMỤMỤ NEKY
Next Post: AKỊ/ỤKWA/AKWỤ